မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခမဲ့ဆေးကုသမှုကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ – Shwehealth.com
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခမဲ့ဆေးကုသမှုကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ
29. မေ 2016 23. မေ 2016
“ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး” ဟူသော မြန်မာစကားပုံတစ်ခု ရှိသည်။ သက်ရှိလူသား တစ်ယောက်အတွက် ကျန်းမာသော ဘ၀တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အရေးကြီးလှသည်။ လူတိုင်း တွင် ဘ၀တလျှောက် သူတို့၏ ရည်မှန်းချက်များ၊ ၀ါသနာများနှင့် အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုအရ လုပ်ချင်သည်များနှင့် လုပ်သင့်သည့်အလုပ်များ များစွာရှိကြသည်။ သင်ဘာကိုပဲ လုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေ အနည်းဆုံးကျန်းမာနေဖို့တော့ လိုသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် နည်းပညာများတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ဆေးကုသမှုစရိတ်များကလည်း လိုက်၍ မြင့်တက်လာနေသည်။ ဆေးကုသမှုစရိတ်များတွင် ဆွေးနွေး ခသို့မဟုတ် ဥာဏ်ပူဇော်ခ၊ စစ်ဆေးမှု ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းခများနှင့် ဆေးဖိုးများ ပါဝင် သည်။ နာတာရှည်ရောဂါများနှင့် ကုသမှုသည် မိမိနေထိုင်ရာဒေသတွင် မရရှိနိုင်သည့်အခါမျိုးတွင် ခရီး သွားစရိတ်နှင့် ဆေးရုံတက်ရသည့် စရိတ်များကပါ ထပ်တိုးစရိတ်အဖြစ် ပါလာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပါက အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်များကို ရှောင်လွှဲနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အ တွက် လာဘ်တစ်ပါးဟု ဆိုနိုင်လေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစရိတ်များ ကြီးမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးနိမ့်ကျ သော လူများတွင် ယင်းစရိတ်များကို တတ်နိုင်ခြင်း မရှိကြတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ထိုသူများသည် ကွမ်း ယာဆိုင်များ၊ ကုန်စုံဆိုင်များနှင့် ဆေးဆိုင်များတွင် ရောင်းချသော စပ်ဆေးများအပေါ်တွင် မှီခိုလာကြ သည်။ ထို့အပြင် ဆေးကုသမှုပြုလုပ်ရန် တရားဝင်လိုင်စင်ရရှိထားခြင်းမရှိကြသည့် သူနာပြုများ၊ ရမ်းကုဟုခေါ်သော ဆရာဝန်အတုများ၊ ဆေးခန်းများတွင် ဆေးပေးသူများနှင့် ဆေးရုံများရှိ လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်းများ၊ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ခွဲစိတ်ခန်းဝန်ထမ်းများအပေါ်တွင် ဆေးကုသမှုအတွက် မှီခို လာကြသည့်အပြင် ယင်းတို့ကလည်း အသေးစားခွဲစိတ်မှုများဖြစ်ကြသည့် ပြည်တည်နာတစ်ခုကို ခွဲ၍ ပြည်ဖောက်ထုတ်ခြင်းကဲ့သို့သော အသေးစားခွဲစိတ်မှုမျိုးကိုပင် ပြုလုပ်လာကြသည်။ ကြားရသည်မှာ မယုံနိုင်စရာပင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းမှာ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျေးလက်ဒေသများနှင့် မြို့များ တွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်များ၏ ရလဒ်အနေဖြင့် ပဋိဇီဝဆေးဝါးများကို ထင်သလိုသုံးစွဲခြင်းကြောင့် ဆေးယဉ်ပါးရောဂါပိုးအသစ်များ ပေါ်ထွက်လာခြင်း၊ ဆေးမတိုးခြင်း၊ သေစေနိုင်လောက်သော ဓာတ် မတည့်မှုများ၊ စတီးရိုက်မဟုတ်သော အရောင်ကျဆေးများ (NSAIDs) ကို အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုများ ကြောင့် အစာအိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများအပြင် သေဆုံးသည်အထိပါ ကြုံတွေ့နေကြရသည်။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်များတွင် အာမခံလုပ်ငန်းများ၏ ကျော်ကြားမှုများအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြားဖူးကြသည်။ ဆေးကုသမှုအာမခံသည် ဆေးကုသစရိတ်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်သော်လည်း ယင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျော်ကြားခြင်းမရှိသေးသလို လူသုံးလည်း နည်းလှ သည်။ မြန်မာပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း အာမခံလုပ်ငန်းများနှင့် အကျွမ်းတ၀င်မရှိလှပေ။ အဆိုပါအ ချက်သည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးကုသစရိတ်များမြင့်တက်လာခြင်း၏ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင် သည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော အခြေအနေများအပေါ် မှီခိုနေရခြင်းကို လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် သီတဂူဆရာတော်နှင့် အရှင်ဆန္ဒာဓိကကဲ့သို့သော ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆရာတော် ကြီးများက နိုင်ငံတ၀ှမ်းတွင် အခမဲ့ဆေးခန်းများစွာ တည်ထောင်ထားကြသည်။
သီတဂူဆရာတော်ကြီးသည် အခမဲ့ဆေးကုသမှုများနှင့် မျက်လုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော ရောဂါများ အတွက် အခမဲ့ခွဲစိတ်မှုများ ရရှိနိုင်မည့် ဆေးရုံများစွာကို တည်ထောင်ထားသည်။ အဆိုပါဆေးရုံများ အတွက် လုပ်အားပေးဆရာဝန်များ၊ မျက်စိအထူးကုများအပြင် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှ အထူးကုများကလာ ရောက်၍ ဆေးကုသမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိသည်။ သင့်အနေဖြင့် မျက်စိပိုင်းဆိုင် ရာ ကုသမှုများကို ထိုနေရာများတွင် အခမဲ့ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိကသည်လည်း နိုင်ငံတ၀ှမ်းတွင် အခမဲ့ဆေးခန်းများစွာ တည်ထောင် ထားသည်။ အဆိုပါဆေးခန်းများသည် တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ရက်ဖွင့်လေ့ရှိပြီး ဆေးကုသမှုနှင့် ခွဲစိတ်မှုများ ကို အခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါဆေးခန်းများတွင်လည်း လုပ်အားပေးအဖြစ် ဆရာဝန်များ၊ သမားတော်များ၊ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များ၊ သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်များ၊ ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်များ၊ ဓာတ်မှန်အထူးကု ဆရာဝန်များနှင့် ဆေးပညာနယ်ပယ်မှ မဟုတ်သော အခြားသူများစွာ ပါဝင်လျက်ရှိကြသည်။
ကရုဏရံသီအခမဲ့နာရေးကူညီမှုအသင်းသည်လည်း ထင်ရှားသော အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံတ၀ှမ်းရှိ မြို့တိုင်းလိုလိုတွင် အသင်းခွဲများရှိနေကြသည်။ ယင်းအဖွဲ့ကို မင်းသားအကယ်ဒမီကျော် သူနှင့်အခြားထင်ရှားကျော်ကြားသူများမှ ဦးဆောင်တည်ထောင်ပြီး လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။ ယင်းအ ဖွဲ့များတွင်လည်း အခမဲ့ဆေးကုသမှုများ၊ အခမဲ့ခွဲစိတ်မှုများနှင့် အခမဲ့လူနာတင်ကား ၀န်ဆောင်မှုများ ကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပင်မအဖွဲ့တည်နေရာမှာ နိဂေါဓလမ်း၊ ၈ ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန် ကုန်ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါနေရာများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထင်ရှားသော အခမဲ့ဆေးကုသမှု ရရှိနိုင် သည့်နေရာများဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတ၀ှမ်းတွင် အခြားအခမဲ့ဆေးကုသမှုပေးနေသော ဆေး ခန်းများစွာလည်း ရှိနေသေးသည်။ ကလေးသူငယ်များကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအတွက် အစိုးရအစီအ စဉ်ဖြင့် ကျေးလက်ဒေသများအထိ ရရှိနိုင်သလို အခြားဆေးများဖြစ်သည့် တီဘီရောဂါကုသဆေးများ နှင့် ခုခံအားနည်းရောဂါကုသဆေးများကို အစိုးရဆေးရုံများတွင်သာမက ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆေးခန်းအ ချို့တွင်လည်း ရရှိနိုင်ကြသည်။